Sideen Ku Ogaadaa Qofka Arkay Twitter-kayga? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideen ku ogaan karaa cidda aragtay barteyda?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 379
Waxaan dhamaanteen la dhacsan nahay xiisaha aan u kicino dadka kale. Waa dhaqan aadamnimo aad u badan. Xiisadda xiisaha leh ayaa naga dhigeysa inaan u adeegsanno warbaahinta si aan u ogaano cidda ka dambeysa waxyaabahayaga ku saabsan baraha bulshada.
Sidoo kale, waxaad dooneysaa inaad ogaato dadka aan la aamini karin ee gala boggaaga, si loo yareeyo marin u helitaanka koontadaada.
Dhinaca kale, haddii aad maamusho koonto ujeeddadeedu tahay iibinta wax soo saarka ama kor u qaadista summad ama shirkad, waad baro dhagaystayaashaada si aad u horumariso xeeladahaaga ganacsi.
Xaqiiqdii ma ogaan karaa cidda hubisa xogtayda?
Jawaabta su’aashaasi waa maya. Waxay u muuqan kartaa wax cabsi leh, laakiin twitter-ka ma bixiso wax suurtagal ah oo lagu muujinayo dadka isticmaala magacyada ama xisaabaadka kuwa isticmaala ee galaya boggooda, gaar ahaan, laakiin adduunka.
Waxaa jira hal qalab oo ay soo saartay Twitter laftiisa si loo ogaado qiyaastii astaamaha soo galaya adiga, kani waa Twitter Analytics. Qalabkan waxaa kaliya loo heli karaa barta internetka, markaa ma awoodi doontid inaad ku isticmaasho barnaamijka twitter-ka.
Sidee buu falanqaynta Twitter u shaqeeyaa?
Falanqaynta Twitter waa aalad kaa caawinaysa inaad barato waxqabadka boggaaga Twitter. Waa tirakoob taxane ah oo barnaamijku soo bandhigayo si loo qiimeeyo sida wax ku oolka ah ee daabacaaddaadu u noqotay, sidaa darteed marka loo eego isdhexgalka ay la yeesheen isticmaaleyaasha, waxaad qiyaas ahaan ogaan doontaa nooca dhagaystayaasha ee koontadaadu doorbideyso.
Waxaa ka mid ah tirakoobka ay twitter-ka ku siiso, waan xusi karnaa: natiijooyinka "dareensiinnada" ama tirada aragtiyada ay tweets-kaagu qabteen. "Booqashooyinka astaanta guud", taas oo kaliya go'aamisa xaddiga, oo aan ahayn cidda soo booqata.
"Mions" ee boggaaga, "Raacayaasha", ama tirada dadka raaca koontadaada. “Xusuusnaan muuqaal leh” ama faallo caan ah oo laga soo qaatay isticmaaleha meesha aad ku xusan tahay “Tweet Featured”, ama ugu faalloon tweet-kii bishii hore.
Waxaa jira codsiyo qaar ka mid ah websaydhka oo sheeganaya inay ku tusi karaan adiga oo galaya boggaaga, laakiin inta badan barnaamijyadan waa been abuur. Adeegga ay bixiyaan waa khiyaano waxaana laga yaabaa inay u adeegsadaan astaantaada bogga inay wax ku xayaysiiyaan, markaa waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin sumcad barta twitter-ka. Gaar ahaan marka koontadaadu u dhigantaa nooc ganacsi.
Barnaamijyada khiyaanada iyo kordhinta
Midka ugu hadal haynta badan waa TwitterCom. Waxay ka muuqataa dukaamada barnaamijka oo xitaa waxay leedahay qiimeyn wanaagsan, laakiin waxaa la go'aamiyay inay macquul tahay inuu virus yahay.
Codsiyadaani waxay ku weydiin doonaan magaca iyo lambarka sirta ah ee koontadaada twitter. Macluumaadkaan ha siinin wax codsi ah oo tixraacyo laxiriira.
Dhinaca kale, waxaad sidoo kale ka heli doontaa qaar ka mid ah kordhinta biraawsarka oo ku siin doona suurtagalnimada inaad ogaato cidda galaya boggaaga. Kordhintaani sidoo kale waa been abuur, waxayna kaliya raadinayaan inay xadaan faahfaahinta koontadaada.
Marka, haddii aad la kulanto kordhinta shirkadaha aan la aqoonsan ee ku siiya adeegga noocan ah, ka fikir laba jeer ka hor intaadan ku dhejin kooxda.
1 Xaqiiqdii ma ogaan karaa cidda hubisa xogtayda?
2 Sidee buu falanqaynta Twitter u shaqeeyaa?
4 Barnaamijyada khiyaanada iyo kordhinta
Sideen ku badbaadin karaa sawirrada muuqda ee la soo dhigay barta Instagram?
Sidee loogu beddelaa magaca Telegram?